12 Mar, 2020 - 15:03	 2020-03-12T15:07:03+00:00 2020-03-12T15:07:03+00:00 0 Views
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 26, ndotsvagawo mukadzi ane makore 19 kusvika 25. Nhare yangu 0785 500 736.
Makadii zvenyu? Ini ndiri murume ane makore 36 nevana 2, ndinodawo mudzimai wemakore ari pasi peangu. Andida ndibate pa0776 799 416.
Makadini? Ndiri murume ane makore 45 nevana 2, ndinotsvagawo mukadzi ari pachokwadi. Ndiri kwaMutare, handishandi. Nhare yangu 0773 800 346.
Ini ndiri murume ane makore 31, ndiri pamushonga uye ndodawo mukadzi ari kuda zvemba kunyanya anobva Rushinga. Ngaave nemakore 18 kusvika 28, anoda ngaandibate pa0774 074 955.
Makasimba here veKwayedza? Ndotsvagawo mudzimai wekuroora ane mwana mumwe kana asina ane makore 20 kusvika 27 ari negative. Ndobatika pa0783 010 466.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 33 nevana vatatu. Ndinotsvagawo murume anoda zvekuroora asinganyepi uye asiri pamapiritsi. Ada nezvangu anondibata pa0787 650 155.
Ndiri mukadzi ane makore 32, HIV positive uye ndinotsvagawo murume ane makore 40 – 45 anoshanda basa riri nani. Ndoitawo basa remaoko, andifarira ngaandibate pa0771 463 987.
Makadii veKwayedza? Ndakazomuwana wandinoda saka vamwe ngavachirega kufona pa0779 519 405.
Makadii? Ndiri murume ane makore 35 ndotsvagawo musikana wekuroora ane makore 20 – 25. Ngaave nurse kana mupurisa. Ini ndoita mabasa emaoko, ndiri kumusha.
Ada nezvangu ngaandibate pa0788 608 198.
Makadiiko? Ndiri murume ane makore 42 nevana 4. Ndotsvagawo mukadzi ane rudo anoshanda muHarare uye anoda zvemusha. Ini ndoshanda muHarare. Ndakarambana nemukadzi. Matsotsi kwete ndapota. Nhare yangu 0713 915 579.
Ndiri murume ane makore 40 ndinodawo mudzmai ari pachokwadi. Ndinobatika pa0774 067 296.
Makadii henyu veKwayedza? Ndotsvagawo musikana ane makore 20 zvichikwira akati simbei uye anotya Mwari. Ngaave ari HIV negative, nhare yangu 0785 841 415.
Ndokutendai nebasa ramunobata, vamwe hatiwane mukana wekupfimba nekuda kwebasa. Ndiri mukoma ane makore 25, ndotsvagawo musikana ane makore 25 zvichidzika asiri pamushonga. Andida ngaandibate pa0776 467 830.
Makadii henyu? Ndinotsvagawo murume anoda zvemba ane mwana wakewo, ini ndine 1. Andida anondibata pa0786 525 390.
Makadii veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 38 nevana vaviri. Ndinotsvagawo murume ari pachokwadi ane makore 47 kusvika 55. Nhare yangu 0786 692 650.
Ndiri murume ane makore 39, ndotsvakawo mukadzi anoda zvemba. Asingaende kubasa anoda nhare dzangu 0774 191 656.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 35, ndinotsvagawo murume anoda zvemba. Handisi pamushonga andifarira ndibate pa0719 493 651. Ndine vana vaviri.
Ndinotsvagawo mukadzi wekuroora mutsvuku, akanaka uye ari serious nekuda imba asi matsotsi kwete. Ngaave nemakore 18 – 25 ane mwana 1 kana asina. Anoda ndibate pa0788 950 288.
Ndiri mukomana ane makore 33, ndotsvakawo musikana ane makore 19 kusvika 29. Handisi pamushonga, ndodawo asiri pamushonga. Nhamba dzangu 0771 557 685.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 38 ndotarisirawo mukadzi anoda zvemba ane makore 28 – 38 nevana. Ngaave anogona zvemabusiness, ndiri bussiness dealer uye mucross-border. Vanoda ndibatei pa0776 443 179 asi ma”house girl” kwete.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 24 ndiri pamushonga uye ndotsvagawo musikana ane makore 18 – 21 ari serious asina mwana. Nhare yangu 0713 420 105.
Makadini? Ndiri mukadzi ane makore 28 nevana vatatu, ndinodawo murume wekuroorwa naye ane makore 45 kusvika 34. Andifarira ngaandibate pa0783 191 414.
Makadii? Ndiri kutsvagawo murume anoda zvekuroora ari serious nokuti ini ndiri serious asiri pamushonga. Ndine makore 33 nevana 3 vasikana. Anenge afarira nezvangu anondibata pa0787 650 155.
Makadii? Ndiri kutsvagawo murume anoda zvekuroora ari pachokwadi nokuti ndanzwa nokunyeperwa. Ndine makore 33 nevana vatatu. Ndinoda murume asiri pamushonga please ndapota hangu. Vandifarira vanondibata pa0787 650 155.
Mui kutsvaga shamwari yechirume kana yechikadzi here? Nyorai ku: Tishamwaridzane; Kwayedza, Box 396 Harare. Munogona kuunza matsamba enyu paHerald House muHarare kana kunyora paemail inoti: [email protected] kana kutumira sms panhamba dzinoti: 0714 200 007.